လူသားတစ်ဦးသည် တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်ထက်ပင် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရံှု့းနေပြီလား…. (aung khaing myint) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇင် မာအောင် - ၀ါ ရှင် တန် မှတ် တမ်း
ဖိုးထက် - သဘောမတူသော အပြုံးတစ်ချက်
မောင်လူပေ - အဟောင်းနဲ့အသစ် မြန်မာကျောင်းသစ်ဆီသို့
အာဆီယံ နှစ်နှစ်နိုင်ငံအရေးမို့ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကြီး ပါဝင်ကူညီပေးစေချင်
ထူးထူး (တောင်ငူ) - တော်လောက်ပြီ
ကျော်ဟုန်း - လောကမိခင်ကို တွေ့ ခြင်း
Po Htet - ချို၊ အီ၊ မွှေး ဘီယာ
၀ါရှင်တန်မက်ထရိုအရပ် သပြေညိုကျောင်းရိပ်က မေငြိမ်း (Interview with May Nyane)
အေးငြိမ်း - အွန်လိုင်းတွင် လုပ်စားခံလိုက်ရသည့် စာရေးဆရာ၏ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month February 2019 (67) January 2019 (138) December 2018 (147) November 2018 (163) October 2018 (183) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
လူသားတစ်ဦးသည် တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်ထက်ပင် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရံှု့းနေပြီလား…. (aung khaing myint)
လူသားတစ်ဦးသည် တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်ထက်ပင် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရံှု့းနေပြီလား….
အောင်ခိုင်မြင့်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ကောက်နုတ်၊ ၀၅ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၃
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးအိုလင်း တွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော Hurricane Katrina ကိုအမှတ်ရကြဦးမည် ထင်ပါသည် ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၏ ဟာရီကိန်းသမိုင်းများအနက် ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံမှုတွင် နံပါတ် ( ၅ ) ၌ ချိတ်သော အဆိုပါ Katrina ဟာရီကိန်းသည် လူပေါင်း ၁၈၃၃ ဦး၏အသက်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့စေယုံမက အဆောက်အဦးအပါအ၀င် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဘိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၁ ဘီလီယံမျှ ရှိခဲ့ပါသည် ။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အစိုးရမှ လူထုသို့ ဟာရီကိန်းဖြစ်ပေါ်မှုကို ကြိုတင် သတိပေးအကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း ဟာရီကိန်းဖြစ်ပြီးနောက် အစိုးရမှ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို အချိန်မီ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် ထိုအချိန်က အမေရိကန် သမ္မတ ဂျော့ဘုရ်အာုး နိုင်ငံရေးအရ အထိနာစေခဲ့သော ပုံရိပ် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် ။
ဒီနေရာ၌ ကျနော် အဓိကထား တင်ပြလိုသည်မှာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သော လူသားများကို မဆိုထားနှင့် ခွေး ၊ ကြောင်စသော တိရိစ္ဆာန်များသည်ပင် အဆိုပါ Katrina ဟာရီကိန်းဖြစ်ပြီးနောက် စနစ်တကျပြန်လည်နေရာ ချထားရေးကို ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါသည် ။
မနေ့ ညက တီဗွီတွင် ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိရိစ္ဆာန်များကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သော အဖွဲ့ တစ်ခုမှ မုန်တိုင်းကျရောက်ပြီးနောက် ပိုင်ရှင်မဲ့ ခွေးများကို စနစ်ကကျ ကယ်တင်ပုံကိုရိုက်ကူးထားသော မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ပြသခဲ့သည် ။ မုန်တိုင်းကျရောက်မည်ကို ကြိုတင်သိသော အခါ လူတစ်ချို့ သည် မုန်တိုင်းနှင့်ဝေးရာသို့ ရှောင်ရှားကျစဉ် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို ၄င်းတို့ နှင့်အတူ ခေါ်သွားခဲ့သူများရှိသလို တစ်ချို့ ကတော့ အိမ်မှာထားရစ်ခဲ့ကျသည် ။ ထိုအခါ မုန်တိုင်းကျရောက်ပြီးသောအခါ၌ သေဆုံးသော တိရိစ္ဆာန်များအမြောက်အများ ရှိသလို မြို့ ပေါ်တွင် မသေပဲ ကျန်ရစ်သော ပိုင်ရှင်မဲ့ သွားလာနေသည့် ခွေးများ ၊ကြောင်များ အများအပြားရှိခဲ့ပါသည် ။
ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ များသည် ထိုတိရိစ္ဆာန်များကို လုံခြုံစိတ်ချ ဘေးကင်းရာသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံအ၀ှမ်းရှိ ( humane society ) လိုနေရာမျိုးသို့ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့သည် ။ ထို့ နောက် ( humane society ) မှ တိရိစ္ဆာန်များကို မူရင်း ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းအပါအ၀င် ၄င်းတို့ ကို မွေးစားမည့် ပိုင်ရှင်သစ်ကို ရှာဖွေပေးခဲ့လေသည် ။
ထို့ ကြောင့် အမေရိကန် နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံတို့ တွင် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်လို လမ်းဘေးခွေးများ မတွေ့ ရခြင်းဖြစ်သည် ။ဒီနိုင်ငံများတွင် မြန်မာပြည်မှာ ကဲ့သို့ လမ်းဘေးခွေးများကို အမဲလုံး ကျွေးသတ်ခြင်းမျိုးလည်း မရှိချေ ။လမ်းတွင် ပိုင်ရှင်မဲ့ ခွေးများ ၊ ကြောင်များတွေ့ ရှိ ပါက အဆိုပါ တိရိစ္ဆာန်များကို ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်သော humane society သို့ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါက ၄င်းတို့ မှ လာရောက် ကယ်ယူပါသည် ။ humane society ဆိုသည်မှာ ခွေးများ ၊ ကြောင်များ ၊ ငှက်များ ၊ ယုန်များ အပါအ၀င် တိရိစ္ဆာန်များကို စနစ်တကျမွေးပြီး မွေးစားမည့် ပိုင်ရှင်ကို ၄င်းတို့ အဖွဲ့ မှ ရှာဖွေပေးပါသည် ။
ဒါတင်မက http://www.petfinder.com/shelters/glwr.html ၀က်ခ်ဆိုက်မှလည်း ပျောက်ဆုံးနေသော တိရိစ္ဆာန်များကို ရှာဖွေပေးပါသည် ။
ဒီနေရာတွင် အနောက်နိုင်ငံများတွင် တိရိစ္ဆာန်များကို တန်ဘိုးထားစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ် ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို အလျဉ်းသင့်၍ တင်ပြလိုပါသည် ။
ကျနော်သည် ကနေဒါနိုင်ငံသို့ ရောက်ခါစတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ရေခဲအမှတ်အောက် -၂၀ ဒီကရီစင်တီဂရိတ် ထိအေး သော ဆောင်းတွင်း၏အေးချမ်းမှုဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံနေခဲ့ရသည် ။တစ်နေ့ တွင် ကျနော်တို့ဇနီးမောင်နှံ နေထိုင်ရာ အိမ်ပေါ်သို့ အ၀ါရောင် ၊ အဖြူရောင် ၊ အနက်ရောင်များဖြင့် ဆေးဆိုးထားသလို လှပသာ ကြောင်မလေးတစ်ကောင် တက်ရောက် လာပါသည် ။ ကြောင်မလေးကို သတိထားမိသည်မှာ သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးအရောင်ဖြစ်သည့် အ၀ါရောင်အား ထူးဆန်းစွာ အမဲရောင်များ ခြေနှစ်ဖက်တွင် ရှိနေပေရာ အမှတ်တမဲ့ ကြည့်လိုက်လျှင် အမဲရောင် ခြေအိပ်လေးဝတ်ထားသလို ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေပေသည် ။ ထို ကြောင်မလေးသည် တညောင်ညောင်နှင့် အစာတောင်းရာ အိမ်တွင် ကြောင်စာလည်းမရှိသဖြင့် အိမ်ရှိ ငါးပိကို ထမင်းနှင့်နယ်ပြီး ကျွေးရာ ဆာလောင်နေသော ကြောင်မလေးမှ အငမ်းမရ စားပါသည် ။ ထိုသို့ စားသောက်ပြီး နောက် အိမ်အောက်သို့ ဆင်းကာ နှင်းများပြည့်နေသော လမ်းပေါ်သို့ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့သည် ။ အစပထမတွင် လမ်းထဲရှိ အိမ်တစ်အိမ်မှ ကြောင်မလေးဖြစ်မည် ဟု ထင်မြင်ယူဆမိသော်လည်း ညနေစောင်းတိုင်း အစာလာတောင်းပြီး နောက်ဆုံးတွင် တခြားသို့ မပြန်ပဲ အိပ်ယာဘေးတွင် ကွေးပါလေတော့သည် ။ကျနော်တို့ ကျွေးသော မြန်မာပြည်က ငပိကို အကြိုက်တွေ့ ပြီး မပြန်လေတော့သည် လားမသိပါ ။ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ကြောင်စာ ၊ ခွေးစာ ၊ ငှက်စာများကို Pet Store များဖွင့်ပြီး ရောင်းချသော်လည်း ထိုအချိန်က အိမ်တွင် ကြောင်စာကို ၀ယ်ရကောင်းမှန်း မသိသေးပါ ။
ကျနော်တို့ ဇနီးမောင်နှံသည် ပိုင်ရှင်မဲ့ ကြောင်မလေးကို သူမ သခင်ထံ ပြန်အပ်ဖို့ humane society သို့ ဖုန်းဆက်ချင် သော်လည်း ဖုန်းနံပါတ်မရှိပဲဖြစ်နေပေသည် ။ ဒီနိုင်ငံတွင် လူသတ်မှုမပြောနှင့် ကြောင်သတ်မှု ၊ ခွေးသတ်မှုတင်မက ကြောင်ကို ညှင်းဆဲမှုသည်ပင် ထောင် ( ၆ ) လကျကြောင်း သတင်းများတွင် တွေ့ နေခဲ့ရသည် ။ ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်ခက်ချေပြီ ၊ ပိုင်ရှင်ရှိသောကြောင်ကို တရားမ၀င် ခေါ်ယူ မွေးထားမှုဖြင့် တရားစွဲ ခံရနိုင်သည်ကို တွေးကြည့်ပြီး ၊ နောက်တနေ့ တွင် တက္ကစီခ အကုန်ခံကာ humane society သို့ ပို့ ဆောင်ခဲ့ကြသည် ။ humane society မှလည်း ပိုင်ရှင်ရှာပေးမည် ဟုပြောဆို သဖြင့် စိတ်အေးခဲ့ရသည် ။
သို့ သော် ကျနော်တို့ ဇနီးမောင်နှံသည် နောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်ညနေစောင်း၌ humane society သို့ သွားရာ ကြောင်မလေးမှာ ပိုင်ရှင်မရှိသေးကြောင်း သိခဲ့ရသည် ။ humane society တွင် ခွေးများ ၊ ကြောင်များကို သီးသန့် စီ ခွဲကာ လှောင်ချိုင့်လေးထဲတွင် ထည့်ထားပါသည် ။
ထိုအချိန်က humane society တွင် တခြားကြောင်များသည် အိပ်နေသော်လည်း ကြောင်မလေးမှာ ငပိနှင့် အစာကျွေးခဲ့ဘူးသော ကျနော်တို့ ကို မှတ်မိကာ တညောင်ညောင်နှင့် အသံတစာစာ အော်ပါလေတော့သည် ။ ထိုအခါ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ပြီး တော်လှန်ရေး ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်စဉ်အခါက ထောင်အကြိမ်ကြိမ်ကျခဲ့ဘူးသော ကျနော်တို့ ( ၂ ) ယောက်သည် လှောင်ချိုင့်ထဲမှ အော်နေသော ကြောင်မလေးကို ကိုယ်ချင်းစာ သနားစိတ် ၀င်ကာ အိမ်၌ ပြန်လည်ခေါ်ယူမွေးစားဖို့ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေသည် ။
humane society မှ လူတစ်ယောက်ကို မွေးစားသကဲ့သို့စာရွက်စာတမ်းများကို လတ်မှတ်ရေးထိုးကာ ကနေဒါ ဒေါ်လာ ( ၁၀၀ ) ကျော်ကုန်ခဲ့ ရပါသည် ။ humane society မှ ကွန်ပြူတာတွင် ကျနော်တို့ ၏ အသက် ၊ နေရပ်လိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပါတ်များကို တောင်းပြီး ကြောင်မလေး၏ အသက် ၊ အရောင် စသော အချက်အလက်များပါသော computer data chip ကို ကြောင်မလေး၏ လည်ပင်းတွင် ထည့်ပေးခဲ့ပါသည် ။ နောက်နောင်တွင် ကြောင်မလေးပျောက်ပါက ကြောင်မလေး၏ လည်ပင်းတွင် မြှပ်ထားသော ၄င်း computer data chip ကို ကြည့်ယုံဖြင့် ပိုင်ရှင်မည်သူ ဆိုတာ သိနိုင်ကြောင်း ၊ ကျွေးရမည့် ကြောင်မလေး၏ နေ့ စဉ်အစားအစာ ၊ နှစ်စဉ်ထိုးရမည့် ဆေး အပါအ၀င် အိမ်သာတက်ရမည့် ပလစ်စတစ်ပုန်းကို ပေးကာ တနာရီ နီးပါး humane society ရှိ အမျိုးသမီး ၀န်ထမ်းတစ်ဦးမှ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြခဲ့ပါသည် ။
ထိုကြောင်မလေးနာမည်ကို မီးမီးဟု အမည် ပေးထားခဲ့ပြီး သူမနှင့် အဖော်ရဖို့ ရာ နောက်ကြောင်မလေးတစ်ကောင် ဖြစ်သော Sun shine ( ဆန်းရှိုင် ) အား ရုရှားသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ထံမှ ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ပြန်ပါသည် ။
( ဆန်းရှိုင် )လေးသည် အလွန်အဆော့သန်ကာ အိမ်ရေ့ဝရန်တာ တွင် လာနားသော ငှက်ကို ပင် အလွတ်မပေးပဲ ဖမ်းနိုင်သည့် အရည်အချင်း ရှိပါသည် ။ သို့ သော်( ဆန်းရှိုင် )လေးသည် ကံအကြောင်းမလှစွာ ကျနော်တို့ နေထိုင်ရာ ( ၇ ) ထပ် apartment မှ အောက်ကို ခြေချော်ကျ သွားခဲ့သည်ထင်ပါသည် ။ကြောင်မလေးမှာ ကြောင်ကျကျသော်လည်း တိုက်အောက် မြေကြီးတွင် ခြေလေးကျိုးပြီး မျက်လုံးလေးကလည်ကလည်နှင့် ငြိမ်သက်နေရာ ကျနော်တို့ မှ humane society သို့ ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားရာ အရေးပေါ် ရှေးဦးသူနာပြုကား (ambulance emergency car ) မှ လာရောက်ခေါ်ယူကာ ဆေးကုသပေးခဲ့ပါသည် ။
ကျနော်တို့ ဇနီးမောင်နှံတွင် ကလေးမရှိသဖြင့် ကြောင်မလေးမီးမီးကို ကျနော်တို့ ကလေးတစ်ယောက်လိုချစ်ပါသည် ။ တစ်ခါက မြန်မာပြည်မှ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ကျနော်တို့ နေထိုင်ရာ ကနေဒါ အော်တာဝါသို့ ကြွလာရာ ကြောင်မလေး မီးမီးအတွက်ရည်စူးပြီး မီးမီးနာမည်နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်သည့် ကျောက်ပြားကို လှူဒန်းဘူးခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ ကြောင်မလေး မီးမီးသည် ကျနော်တို့ နှင့် ( ၁၃ ) နှစ်မျှအတူနေပြီး ကြောင်မလေး ( ၁၅ )နှစ်အရွယ်တွင် လောကကြီးမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည် ။ ကြောင်မလေးအတွက် အိမ်တွင် ခရစ်ယာန်လို ဆုတောင်းယုံမက မြန်မာပြည်မှ အမေမှလည်း ကြောင်မလေးမီးမီးအတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဆွမ်းပို့ ပေးခဲ့ပေသည် ။ ဒီလောက် နူးညံ့သော နှလုံးသား ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပေမဲ့ ( ၂၅ ) နှစ်ကြာ တော်လှန်ရေးသမား သူပုန်ဖြစ်နေသော မိမိကိုယ်မိမိ အံ့သြမိသည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည် ။
ကြောင်မလေး မီးမီး ကွယ်လွန်သော အခါ အထက်ပါ humane society သို့ သွားရောက် ပို့ ဆောင်ရာ သဂြိုလ်မည့် မြေကိစ္စ အ၀၀ကို ၄င်းတို့ မှ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည် ။ ကနေဒါနိုင်ငံ ရှိ မြို့ များတွင် တိရိစ္ဆာန် သင်္ချိုင်းများရှိပါသည် ။ဒီနိုင်ငံတွေမှာ တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို ပင် လူသားတစ်ဦးလို တန်ဘိုးထား စောင့်ရှောက်ပါသည် ။
ပြီးခဲ့သော နှစ်များအတွင်းက ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရန်တို မြို့ ရှိ humane society တွင် တိရိစ္ဆာန်များကိုကျွေးမွေးရမည့် ဘတ်ဂျတ်ကိုအလွဲသုံးစား လုပ်သဖြင့် ငွေအလွဲသုံးစားလုပ်သူအား ဖမ်းဆီးထောင်ချသည့် အမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည် ။
အနောက် နိုင်ငံသို့ ရောက်ခါစ မြန်မာလူမျိုးများသည် တိရိစ္ဆာန်တို့ ၏ အခွင့်အရေးများကို အတိအကျ မသိသေးသဖြင့် ဒဏ်ငွေဆောင်ရမှုများ ရှိခဲ့ပါသည် ။ ကျနော်တို့ မြို့ တွင် နွေရာသီ၌ နေရောင်ခြည် နုနု၏အောက်တွင် ငါးမျှားခြင်းသည် အပျင်းပြေသလို ကနေဒါလူမျိုးများအတွက် ဖက်ရှင်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါသည် ။ အလုပ်လုပ်သော လုပ်ငန်းခွင်တွင်ပင် အပျော်တမ်း ငါးဖမ်းချင်လျှင် မော်တော်ဘုတ် ငါးဖမ်းစက်လှေ များကို စီစဉ်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးလျှင် ဘယ်လောက်ကျမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာများတွေ့ ရသည် ။ မြို့ ဘေးရှိ မြစ်အပါအ၀င် မည်သည့်နေရာတွင် မဆိုငါးဖမ်းချင် ပါက လိုင်စင်လုပ်ရပါသည် ။ ၄င်း လိုင်စင်ကို လမ်းဘေးရှိ ဆိုင်များတွင် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည် ။
ကနေဒီယံ လူမျိုးများသည် အပျော်တမ်း ငါးဖမ်းပြီး ဖမ်းမိသော ငါးများကို ဖမ်းမိမိချင်း ရေထဲသို့ ပြန်လွှတ်ပေးသော်လည်း ကျနော်တို့ ကိုယ်ရွှေမြန်မာတွေက မလွှတ်ယုံမက အချင်းချင်း အလကားပေးသူရှိသလို စီးပွားဖြစ် ပြန်ရောင်းသူများလည်းရှိပါသည် ။
တစ်ခါက အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်ပြည်နယ် ယူတီကာမြို့ သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှ ပြောသည်မှာ အရင်က ဖမ်းမလောက်အောင်ပေါသောငါးများသည် ရွှေမြန်မာများလက်ချက်နှင့် ရှားပါးကာ မျိုးတုန်းလုနီးပါးဖြစ်နေကြောင်းပြောပြခဲ့ပေသည် ။ ကိုယ်ရွှေမြန်မာများသည် လိုင်စင်မဲ့ ငါးဖမ်းမှုအပါအ၀င် တရားဝင် သတ်မှတ်ထားသော အရွယ်ထက် ငယ်သော ငါးများကို ဖမ်းဆီးမှုဖြင့် ဒဏ်ငွေဆောင်ရမှုများ မကြာခဏကြားခဲ့ရသည် ။
ထို့ အပြင် ရာသီဥတု ဆိုးဝါးသော ဆောင်းရာသီတွင် မြောက်ဝန်ရိုးစွန်းဖက်မှ အုပ်စုဖွဲ့ ပျံသန်းလာသော ဘဲအုပ်သည် နွေးထွေးသော ရာသီရှိရာ တောင်ပိုင်းသို့ ပျံသန်းစဉ် ကျနော်တို့ မြို့ ရှိ ကွင်းပြင်၌ တထောက်နားပါသည် ။ ထောင်သောင်းမက သော ဘဲများသည် ကွင်းပြင်တွင် အုပ်စုဖွဲ့ ကာ ဆူညံနေသော်လည်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှဖမ်းဆီး ပစ်သတ် ပိုင်ခွင့်မရှိချေ ။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အဆိုပါ ဘဲကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ပါက ငွေ ဒဏ်မက ထောင်ဒဏ်ပါ ကျခံနိုင်ပေသည် ။
တစ်ခါက မြို့ ပြင်ဖက်ထွက်ပြီး ကားမောင်းရာ ကားသည် တစ်နေရာ အရောက်တွင် ဘီးလှိမ့်ယုံသာ သွားနိုင်ပြီး ကားတန်းရှည်ကြီးဖြင့် traffic ဖြစ်နေပေသည် ။ အကြောင်းအရင်း က ဘဲကလေး ( ၁၂ ) ကောင်ကို ဘဲမကြီးမှ ဦးဆောင်ပြီး ကားလမ်းဖြတ်ကူးနေသဖြင့် ကားအားလုံးမှ ဘဲမိသားစု လမ်းဖြတ်ကူးသည့် အချိန်ထိ စောင့်နေရခြင်း ဖြစ်ပေသည် ။
အနောက်နိုင်ငံတွင် တိရိစ္ဆာန်များသည်ပင် အခွင့်အရေးများ ရရှိနေပေသည် ။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်တွင်မူ လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်ထက်ပင် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရံှု့းနေပြီလား….၊
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်တွင် လူကိုလူလို မမြင်ယုံမက လူ့ အသက်ပေါင်းများစွာကို သေ ကြေစေသည့် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချပါသည် ။
၀၅ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၃
(မိုးမခ – စာမူကို နှစ်သက်လို့ ယူတင်လိုက်ပါတယ်။ သည်ကနေပြီး စာမူရှင်ကို ခွင့်တောင်းလိုက်သည်)
နှင်းခါးမိုး – ရပ်ကွက်ထဲကတေးဘုမ္မာ (0)
နွယ်နွယ်လွင် ● ကျမသိသော ဥပဒေ (0)
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံ တက်ရောက်သည့်အတွေ့အကြုံ စတုတ္ထပိုင်း- (0)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ